soldering mhangura chubhu - induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
soldering mhangura tube
Induction Soldering Copper Tube neHigh Frequency Heating Units
Chinangwa: Kupisa chikamu che3 / 8 ″ machubhu emhangura pamwe ne elbow 900 yekunamatira. Iyo yemhangura tubing inofanira kushandiswa muIchina Machine Evaporator Assemblies, uye kugadzira pasi kunoitika mushure mekunge machubhu aiswa mukati megungano. Kuchenesa kunofanirwa kuitika mune chiteshi mhando coil kuti ipe nyore kuwana, kana iyo tubing yaiswa. Solder inogona kudyiwa nemaoko mushure mekushisa
Chinyorwa: 3/8 ″ Mutete Wemadziro Wemhangura Tubing uye 900 Elbow
Kushanda: Kuburikidza nekushandiswa kweiyo DW-UHF-20kW kuburitsa solid state induction magetsi uye yakasarudzika matatu (3) shandura chiteshi coil, inotevera mhedzisiro yakawanikwa.
6000F yakazosvika mu 10 seconds.
A yemhando yekutengesa yakabatana yakaonekwa pamwe nekuyerera kwakaringana uye pamusoro pekugadzirwa.
Zvishandiso: DW-UHF-20kW kuburitsa solid state induction magetsi inosanganisira imwe (1) kure kupisa chiteshi chine imwe (1) 1.2 μF capacitor, uye yakasarudzika matatu (3) shandura chiteshi coil.
Kakawanda: 200 kHz
Categories Technologies Tags induction soldering mhangura, induction kutengesa mhangura pombi, soldering mhangura, Kutengesa pombi yemhangura, soldering mhangura tube, soldering coppr tubing